149s Ihuru n&#39;anya (2020) Official Trailer | AKW SeriesKWỌ EGO images and subtitles
RICHARD SCOTT SMITH (N’AKA ekwentị): Ana m achọ ihe na enwetụbeghị m mbụ. Achọrọ m ka achọrọ m. Aga m eme ihe ọ bụla iji bụrụ ihe ọ bụla. M zutere Scott-- - M zutere Rick. Ọ kpọrọ onwe ya Mickey. Ahụrụ m ya n'anya. RICHARD SCOTT SMITH (NA ekwentị): just ga-atụkwasị m obi. Izu abụọ mgbe anyị zutere, ọ sịrị, ahụrụ m gị n'anya. Echere m na nke ahụ dị egwu. M wee hụ blọgụ nwere foto ya n’elu. Akpọrọ m mama m wee sị, Mickey ọbụghị onye ị chere na ya bụ. Abụ m nwunye nọmba itoolu. Jean, Sandy, Candy, Ruth, Carol, Tracy, Lisa, Miriam, Jennifer. [INHALING IHE] O zuru ya 401 (k). $ 100,000. $ 700,000. Etufuru m ihe niile. Ọ ghaara ụwa ụgha ma wee pụọ n'anya. Oke eli, gị akwa nke-- Anyị na-eso gị n'azụ. Achọrọ m inyere aka. Richard Scott Smith na-agba ọsọ. Onwere ogha di iche iche nke ndi ozo di iche-iche. nọmba nchekwa ọha. Ọ dị mma n'ihe ọ na-eme. Ọ dịghị onye ga na-arụ ọrụ n'okporo ámá na-achọ ya, ewezuga anyị. Nke a bụ egwuregwu zuru oke. M pụtara, ọ na-eme nke a kemgbe ọtụtụ afọ! Zọ kachasị mma iji merie nwoke bụ ịbọ ọbọ. Ọ dị m nwute. Ọ bụ. Mgbe ọ bụ nwata, ọ mara ihe ziri ezi na ihe ọjọọ. Kedu ihe gbagọrọ n’isi ya? Ọ dị mma, enwetara m ya. Ọ na-aga ịkwụsị otu n'ime ụzọ abụọ-- n’ụlọ nga ma ọ bụ n’igbe ozu. RICHARD SCOTT SMITH (NA ONWU IME): Ahụrụ m gị n'anya. Ahuru m Chineke eziokwu. Ọ bụ onye mpako ịboụ ara ehi ụra. Akpọrọ m ya asị.
Ihuru n&#39;anya (2020) Official Trailer | AKW SeriesKWỌ EGO
< start="5.57" dur="5.046"> RICHARD SCOTT SMITH (N’AKA ekwentị): Ana m achọ ihe >
< start="10.616" dur="2.919"> na enwetụbeghị m mbụ. >
< start="13.535" dur="1.425"> Achọrọ m ka achọrọ m. >
< start="17.702" dur="2.855"> Aga m eme ihe ọ bụla iji bụrụ ihe ọ bụla. >
< start="23.89" dur="0.8"> M zutere Scott-- >
< start="24.69" dur="0.8"> - M zutere Rick. >
< start="25.49" dur="1.24"> Ọ kpọrọ onwe ya Mickey. >
< start="26.73" dur="1.23"> Ahụrụ m ya n'anya. >
< start="27.96" dur="1.867"> RICHARD SCOTT SMITH (NA ekwentị): just ga-atụkwasị m obi. >
< start="31.67" dur="2.72"> Izu abụọ mgbe anyị zutere, ọ sịrị, ahụrụ m gị n'anya. >
< start="34.39" dur="2.71"> Echere m na nke ahụ dị egwu. >
< start="37.1" dur="3.6"> M wee hụ blọgụ nwere foto ya n’elu. >
< start="40.7" dur="2.46"> Akpọrọ m mama m wee sị, Mickey >
< start="43.16" dur="2.52"> ọbụghị onye ị chere na ya bụ. >
< start="45.68" dur="2.01"> Abụ m nwunye nọmba itoolu. >
< start="52.106" dur="1.892"> [INHALING IHE] >
< start="55.89" dur="1.94"> O zuru ya 401 (k). >
< start="59.95" dur="1.99"> Etufuru m ihe niile. >
< start="61.94" dur="4.71"> Ọ ghaara ụwa ụgha ma wee pụọ n'anya. >
< start="66.65" dur="1.94"> Oke eli, gị akwa nke-- >
< start="68.59" dur="0.97"> Anyị na-eso gị n'azụ. >
< start="74" dur="1.23"> Achọrọ m inyere aka. >
< start="75.23" dur="1.8"> Richard Scott Smith na-agba ọsọ. >
< start="77.03" dur="2.37"> Onwere ogha di iche iche nke ndi ozo di iche-iche. >
< start="79.4" dur="1.14"> nọmba nchekwa ọha. >
< start="80.54" dur="3.12"> Ọ dị mma n'ihe ọ na-eme. >
< start="83.66" dur="3.27"> Ọ dịghị onye ga na-arụ ọrụ n'okporo ámá na-achọ ya, >
< start="86.93" dur="1.14"> ewezuga anyị. >
< start="88.07" dur="1.42"> Nke a bụ egwuregwu zuru oke. >
< start="89.49" dur="1.805"> M pụtara, ọ na-eme nke a kemgbe ọtụtụ afọ! >
< start="91.295" dur="1.975"> Zọ kachasị mma iji merie nwoke bụ ịbọ ọbọ. >
< start="93.27" dur="0.8"> Ọ dị m nwute. >
< start="94.07" dur="0.8"> Ọ bụ. >
< start="99.1" dur="2.88"> Mgbe ọ bụ nwata, ọ mara ihe ziri ezi na ihe ọjọọ. >
< start="101.98" dur="2.73"> Kedu ihe gbagọrọ n’isi ya? >
< start="104.71" dur="1.12"> Ọ dị mma, enwetara m ya. >
< start="105.83" dur="1.67"> Ọ na-aga ịkwụsị otu n'ime ụzọ abụọ-- >
< start="107.5" dur="2.61"> n’ụlọ nga ma ọ bụ n’igbe ozu. >
< start="113.22" dur="1.74"> RICHARD SCOTT SMITH (NA ONWU IME): Ahụrụ m gị n'anya. >
< start="114.96" dur="4"> Ahuru m Chineke eziokwu. >
< start="118.96" dur="1.35"> Ọ bụ onye mpako ịboụ ara ehi ụra. >
< start="120.31" dur="1.76"> Akpọrọ m ya asị. >